Nnwom 41 NA-TWI;NIV - Ɔyarefo mpaebɔ - Nhyira nka wɔn a - Bible Gateway
Nnwom 40Nnwom 42
Nnwom 41 Nkwa Asem (NA-TWI)
41 Nhyira nka wɔn a ahiafo asɛm yɛ wɔn asɛnhia. Awurade bɛboa wɔn wɔ wɔn haw mu. 2 Awurade bɛbɔ wɔn ne wɔn nkwa ho ban de wɔn asie. Ɔbɛma wɔn ahotɔ wɔ asase no so. Ɔrennyaa wɔn mma wɔn atamfo tumi. 3 Awurade bɛboa wɔn wɔn yare mu na wasa wɔn yare.